Political Page ပုလဲသွယ်: 25-1-2012 NLD office opened in Pale
Political Page ပုလဲသွယ်
25-1-2012 NLD office opened in Pale
၂၅၊ ၁၊ ၂ဝ၁၂ ရက်နေ့ နံနက် စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ပုလဲမြို့နယ် NLD ရုံး ဆိုင်းဘုတ်တင် အခမ်းအနား ကျင်းပပါတယ်။ အခမ်းအနားကို ဒေသခံတွေအပြင် မုံရွာ၊ မြင်းမူ၊ ချောင်းဦး၊ အရာတော်၊ ဆားလင်းကြီး၊ ယင်းမာပင်မြို့နယ်က ဒီမိုကရေစီအရေး လှုပ်ရှားသူတွေလည်း တက်ရောက်ပါတယ်။ စုစုပေါင်း အင်အား နှစ်သောင်းကျော်မယ်လို့ သိရပါတယ်။ (ဓာတ်ပုံများ-NLD)
Posted by Dr. Tint Swe at 6:31 AM
၁၉၉၃ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလအထူးကိုယ်စားလှယ် (ယိုဇိုယိုကိုတာ) လာစဉ်က NLD/LA ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် ထိုင်းနယ်စပ်တနေရာမှာ သွားရောက်တွေ့စဉ်က ကရင်ဒုက္ခသည် လူနာများကို ဆေးဝါးကုသပေးခဲ့ရစဉ်က
KNU ကရင့်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ထိန်းချုပ်ရာ တောစခန်းတခုမှာ NLD/LA ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးတက်စဉ်က၊ ခုနှစ်
Total Page Viewers before this Blog
14-12-2011 Demo on the visit of Parliamentarians from Burma to India
၁၄-၁၂-၂ဝ၁၁ မြန်မာလွှတ်တော်အဖွဲ့၏ အိန္ဒိယခရီးစဉ်အတွင်း ပြုလုပ်သော ဆန္ဒပြပွဲ
10-12-2011 International Human Rights Day
၁ဝ-၁၂-၂ဝ၁၁ နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးနေ့၊ နယူးဒေလီ
8-12-2011 Protest against Thamanti Dam
၈-၁၂-၂ဝ၁၁ KWHRO နှင့် KASDF တို့မှ ဦးစီးသော ထမံသီရေကာတာ ဆန္ဒပြပွဲ
21-11-2011 Helping Burma Through India
Burma Center Prague: Retrospect and Grassroots Views 2010-2011; Release of the publication. The project is supported by the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic within its Transition Promotion Program
14-11-2011 Winter Sport Festival opened
၁၄-၁၁-၂ဝ၁၁ ဆောင်းရာသီ အားကစား ပြိုင်ပွဲ UNHCR Chief of Mission မှ ဖွင့်လှစ်ပေးစဉ်
21-10-2011 Tibetan Solidarity Movement in New Delhi
၂၁-၁ဝ-၂ဝ၁၁ တိဘက်အရေး လှုတ်ရှားမှုတွင် တက်ရောက်အားပေးစဉ်
18-10-2011 Min Ko Naing birthday in New Delhi
၁၈-၁ဝ-၂ဝ၁၁ မင်းကိုနိုင် (သို့မဟုတ်) ကိုပေါ်ဦးထွန်း မွေးနေ့၊ နယူးဒေလီ
13-10-2011 Demonstration during President of Burma to India
၁၃-၁ဝ-၂ဝ၁၁ မြန်မာသမတ၏ အိန္ဒိယ ခရီးစဉ်အတွင်း ပြုလုပ်သော ဆန္ဒပြပွဲ
10-10-2011 Socialist International Asia Pacific Committee Meeting
၁ဝ-၁ဝ-၂ဝ၁၁ ဆိုရှယ်လစ်-အင်တာနေရှင်နယ်၊ အာရှ-ပစိဖိတ်
ကော်မတီ အစည်းအဝေး၊ မွန်ဂိုလီယားနိုင်ငံ၊ အူလန်ဘာတာမြို့တော်
19-9-2011 VIF Seminar on Myanmar in Transition - Asian Perspectives
၁၉-၉-၂ဝ၁၁ (ဗီဗာကာနန္ဒာ) နိုင်ငံတကာ (ဖေါင်ဒေးရှင်း) က ဦးစီးပြုလုပ်သော
6-9-2011 Press Conference
၆-၉-၂ဝ၁၁ မြန်မာ့အရေး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ
27-8-2011 Interactive Session on Democratization & Reconciliation - Burma at Crossroads at (IIC)
၂၇-၈-၂ဝ၁၁ အိန္ဒိယ နိုင်ငံတကာ (စင်တာ) တွင် ကျင်းပသော မြန်မာ့အရေး ဆွေးနွေးပွဲ
13-8-2011 44th Arakan Rice Crisis Anniversary Day
၁၃-၈-၂ဝ၁၁ (၃၃) ကြိမ်မြောက် ရခိုင်ပြည် ဆန်ပြဿနာနေ့ အခန်းအနား
12-8-2011 Discussion and Exchange for Democracy in Burma
၁၂-၈-၂ဝ၁၁ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အခြေအနေများ ဆွေးနွေးပွဲ
8-8-2011 Demonstration in New Delhi
၈-၈-၂ဝ၁၁ ရှစ်လေးလုံး နှစ်ပတ်လည်နေ့ ဆန္ဒပြပွဲ
22-7-2011 Protest in Delhi
၂၂-၇-၂ဝ၁၁ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး ဆန္ဒပြပွဲ
22-7-2011 Comic Workshop completion
၂၂-၇-၂ဝ၁၁ ကာတွန်းပညာ သင်တန်း
19-6-2011 Daw Aung San Suu Kyi's birthday = Women's Days of Burma
၁၉-၆-၁ဝ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မွေးနေ့ နယူးဒေလီတွင် အာရှအမျိုးသမီးများနေ့ အဖြစ်ကျင်းပစဉ်
1-6-2011 Meeting to hold Memorial Day for Salai Tin Maung Oo
၁-၆-၂ဝ၁၁ ဆလိုင်း-တင်မောင်ဦး နေ့ ကျင်းပရေး အစည်းအဝေး
20-5-2011 The 92nd Kuki Rising Day in New Delhi
၂ဝ-၅-၂ဝ၁၁ (၉၂) နှစ်မြောက် ကူကီး တော်လှန်ရေးနေ့ အခန်းအနား
19-5-2011 Released 31 Freedom Fighters from Burma at Delhi airport
အိန္ဒိယထောင်များထဲတွင် ၁၃ နှစ်ကျော်
လာကြသော ရခိုင် နှင့် ကရင် တော်လှန်ရေးသမားများ
19-5-2011 Ethnic women and girls to greet 32 Araken and Karen Freedom Fighters
အား ဒေလီလေဆိပ်မှ ကြိုဆိုနေကြသည့် တိုင်းရင်းသူများ
7-5-2011 The Aizawl Post front page
6-5-2011 Consultation on Regime change in Burma - Post 2010 Elections and its consequences in Aizaw
Organized by Burma Center Delhi with CHRO and Greassroot Development Network
27-4-2011 Meeting on signature campaign initiated by NLD
၂၇-၄-၂ဝ၁၁ NLD ဦးဆောင်သည့် လက်မှတ်ထိုး (ကင့်ပိန်း) ထောက်ခံရေး
27-3-1011 The 66th Resistance Day in Delhi
၂၇-၃-၂ဝ၁၁ (၆၆) ကြိမ်မြောက် ဖက်ဆစ် တော်လှန်ရေးနေ့
25-3-2011 International Seminar on Democracy and Human Rights in South Asia
၂၅-၃-၂ဝ၁၁ (မဒရပ်စ်) တက္ကသိုလ် တွင်ကျင်းပသော တောင်အာရှ ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေး (ဆီမီနာ)
11-3-2011 Talk on Health of Burmese Refugees at St. Stephen College
၁၁-၃-၂ဝ၁၁ (စိန့်-စတီဖင်) ကောလိပ်တွင် ကျင်းပသော မြန်မာ ဒုက္ခသည်များ၏ ကျန်းမာရေး ဟောပြောပွဲ
4-3-2011 Democratization in Myanmar (Burma) at Zakir Husain College
၄-၃-၂ဝ၁၁ (ဇကီးဟူစိန်) ကောလိပ်တွင် ကျင်းပသော မြန်မာ့အရေး (ဆီမီနာ)
13-2-2011 Children Day of Burma
၁၃-၂-၂ဝ၁၁ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမွေးနေ့ - မြန်မာကလေးများနေ့
12-2-2011 64th anniversary of Union Day in New Delhi
၁၂-၂-၂ဝ၁၁ (၆၄) နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့
11-2-2011 Global Campaign for the release of 34 Burmese Freedom Fighters in India
၁၁-၂-၂ဝ၁၁ ထောင်ထဲတွင် ၁၃ နှစ် အဖမ်းခံထားရသည့် မြန်မာနိုင်ငံမှ (ရခိုင် နှင့် ကရင်) ၃၄ ဦး လွတ်မြောက်ရေး လှုတ်ရှားမှု
18-12-2010 Burma Literary Day
၁၃၇၂ စာဆိုတော်နေ့၊ နယူးဒေလီ
15-12-2010 Talk to students of Prospect Burma
၁၅-၁၂-၂ဝ၁ဝ Prospect Burma ကျောင်းသားများအား ကျန်းမာရေး နှင့် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးစဉ်
13-12-2010 Panel Discussion on Myanmar (Burma)’s Road To Democracy
International Jurist Organization and Global Studies Programme, Jawaharlal Nehru University Seminar
12-11-2010 “Human Migration and Displacement: New Challenges to National, Regional and Global Governance”
7-12-2010 Celebration for Freedom of Daw Aung San Suu Kyi in New Delhi
၇-၁၂-၂ဝ၁ဝ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်လာခြင်းအား ကြိုဆို ဂုဏ်ပြုသည့် သီချင်း သီဆိုကြစဉ်
25-11-2010 Violence against Women Day in New Delhi
၂၅-၁၁-၂ဝ၁ဝ နိုင်ငံတကာ အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုများ ပပျောက်ရေးနေ့၊ နယူးဒေလီ
23-11-2010 Strategy Session organized by Burma Center Delhi
၂၃-၁၁-၂ဝ၁ဝ မြန်မာ-စင်တာ-ဒေလီ ၏ မဟာဗျူဟာ အစည်းအဝေး
22-11-2010 India’s Relationship with Myanmar: Why Fence sitting is notaStrategic Option
Dr. Marie Lall, FRSA, andaSouth Asia specialist at the University of London
17-11-2010 Winter Sport festival in Delhi in honor of Daw Aung San Suu Kyi release
၁၇-၁၁-၂ဝ၁ဝ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်လာခြင်းအား ဂူဏ်ပြု ကြိုဆိုသည့် ဆောင်းရာသီ အားကစားပြိုင်ပွဲ၊ နယူးဒေလီ
13-11-2010 Daw Aung San Suu Kyi released
5-6-7 November 2010 6th International Conference of Tibet Support Groups
With professor Samdhong Rinpoche, Kalon Tripa
7-11-2010 6th International Tibet Support Groups
3-11-2010 Global Campaign against 2010 Election
၃-၁၁-၂ဝ၁ဝ နအဖ ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင်ပွဲ၊ နယူးဒေလီ
3-11-2010 Protest against SPDC Election 2010
Supported by the Principal Opposition party BJP
30-10-2010 Battling for Survival Book Released
The Record on Burmese Refugees and Asymum Seekers in India published by the Other Media was released
29-10-2010 Campaign against 2010 Election in New Delhi
၂၉-၁ဝ-၂ဝ၁ဝ နအဖ ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင်သည့် လှုတ်ရှားမှု တစိတ်တပိုင်း
15-10-2010 Youth Political Refresher Course
၁၅-၁ဝ-၂ဝ၁ဝ ဇိုမီး (ကွန်မြူနတီ) မှ စီစဉ်သော လူငယ် နိုင်ငံရေး မွမ်းမံသင်တန်း
1-10-2010 Youth Political Refresher Course
၁-၁ဝ-၂ဝ၁ဝ ဒေလီ မတူ (ကွန်မြူနတီ) မှ စီစဉ်သော လူငယ် နိုင်ငံရေး မွမ်းမံသင်တန်း
27-9-2010 Media Workshop and Press Conference
Organized by Burma Centre Delhi and Burma Centre Prague
21-9-2010 International Day of Peace
၂၁-၉-၂ဝ၁ဝ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ အခန်းအနား နှင့် ဆွေးနွေးပွဲ
17-9-2010 Talk to Burmese Women in Delhi (BWD)
၁၇-၉-၂ဝ၁ဝ BWD အမျိုးသမီးများအား
14-9-2010 Youth Political Refresher Course
၁၄-၉-၂ဝ၁ဝ မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များ နိုင်ငံရေး မွမ်းမံသင်တန်း
9-8-2010 Talk to Burmese Women in Delhi
၉-၈-၂ဝ၁ဝ BWD မှစီစဉ်သော
26-7-2010 Protest against Than Swe's visit to India
၂၆-၇-၂ဝ၁ဝ စစ်အာဏာရှင်၏ ခရီးစဉ် ဆန့်ကျင်ပွဲ
19-7-2010 The 63rd Martyrs Day in New Delhi
၁၉-၇-၂ဝ၁ဝ (၆၃) ကြိမ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ ပန်းချီပြိုင်ပွဲ ဆုရသူတဦးအား ဆုပေးနေစဉ်
12-7-2010 (34) Burmese Freedom Fighters in Calcutta Court
အန္ဒိယ အကျဉ်းထောင်ထဲ ၁၃ နှစ်ကြာ ထိန်းသိမ်းခံနေရသည့် ရခိုင် နှင့် ကရင်တော်လှန်ရေးသမား ၃၄ ဦး
17-6-2010 Public Awareness for Daw Aung San Suu Kyi's birthday
၁၇-၆-၂ဝ၁ဝ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ၆၅ နှစ် မွေးနေ့ အကြို လူထုနိုင်ငံရေးအသိပေး ဟောပြောခြင်း
29-5-2010 Burmese and Tibetan activists join together at BCRC
၂၉-၅-၂ဝ၁ဝ တိဘက် ရုပ်ရှင် The Sun Behind The Cloud ပြပွဲ
28-5-2010 The people's ballot box was sent to Indian Prime Minister
၂၈-၅-၂ဝ၁ဝ ဒေလီရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများက တခဲနက် ထည့်ခဲ့ကြသည့် မဲပုံးအား အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ထံ ပေးပို့နေကြသော ကိုကင်မ် နှင့် ကိုဆလောင်း
27-5-2010 Global Campaign against 2010 Election
၂၇-၅-၂ဝ၁ဝ နအဖ ၏ ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲအား ဆန့်ကျင်သည့် ဆန္ဒပြပွဲ၊ နယူးဒေလီ
2-6 May 2010 Nonviolence Youth Training at Dharamsala (Understanding Swaraj)
၂ဝ၁ဝ မေလ ၂ မှ ၆ အထိ (ဒါရမ်ဆာလာ) တွင် ပြုလုပ်သော အကြမ်းမဖက် လူငယ်သင်တန်းသို့ တက်ရောက်ကြသော မြန်မာ လူငယ် ၆ ဦး
1-5-2010 May Day organized by FTUB in New Delhi
၁-၅-၂ဝ၁ဝ FTUB မှ ဦးစီး ကျင်းပသော
30-3-2010 Honoring U Do Thawung, MP (NLD), Kalay (1)
၃ဝ-၃-၂ဝ၁ဝ ကွယ်လွန်သူ ကလေး (၁) NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဒိုထောင်း အားအောက်မေ့ ဂုဏ်ပြုပွဲ
20-3-2010 All brave protesters released
၂ဝ-၃-၂ဝ၁ဝ နေ့က အာမခံဖြင့် ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာကြသော ရဲဘော်သုံးကျိတ်
19-3-2010 Protest in front of Burmese embassy in New Delhi
၁၉-၃-၂ဝ၁ဝ နယူးဒေလီ၊ မြန်မာသံရုံးတွင် ဆန္ဒပြသူများ၏ ရေးသားထားချက်များ
17-3-2010 Protest against 2010 Election Laws in Burma
Sharad Joshi, Convener, lndian Parliamentarians' Forum for Democracy in Burma
15-3-2010 Protest against Dam project in Kachin State
၂ဝ၁ဝ ကချင်ပြည်နယ်မှ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို ဆန့်ကျင်ပွဲ
12-3-2010 All-group meeting to protest against 2010 Election Law
၁၂-၃-၂ဝ၁ဝ နအဖ မှ တဖက်သတ် ထုတ်ပြန်လိုက်သော ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဥပဒေများကို ဆန့်ကျင်ရေးအတွက် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ NCGUB ရုံးတွင် ကျင်းပစဉ်
8-3-2010 International Women Day in New Delhi
၈-၃-၂ဝ၁ဝ နိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးများနေ့၊ နယူးဒေလီ
8-3-2010 Consultation with Refugee Committees at BCD
၈-၂-၂ဝ၁ဝ BCD တွင် Refugee Committees များနှင့် ဆွေးနွေးစဉ်
20-2-2010 The 62nd Chin National Day in New Delhi
၂ဝ-၂-၂ဝ၁ဝ (၆၂) ကြိမ်မြောက် ချင်းအမျိုးသားနေ့
16-2-2010 Youth Training on Restoration of Democracy through Nonviolence
Organized by Swaraj Peeth Trust and assisted by Burma Centre Delhi and NCGUB
၁၃-၂-၂ဝ၁ဝ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ၉၅ နှစ်မြောက် မွေးနေ့
WRWAB မှ ဦးစီးပြုလုပ်သည့် ကလေးများနေ့ ကလေးကဗျာနှင့် သီချင်းပြိုင်ပွဲ
5-2-2010 The 49th Anniversary of Kachin Resistance Day
၅-၂-၂ဝ၁ဝ ကချင်တော်လှန်ရေး ၄၉ နှစ်ပါတ်လည်နေ့ ကချင်အမျိုးသားများ ဦးဆောင်သည့် ဆန္ဒပြပွဲ၊ နယူးဒေလီ
30-1-2010 Media Consultation Meeting on Burma Polls
၃ဝ-၁-၂ဝ၁ဝ အိန္ဒိယနိုင်ငံ (ဂဝါဟာတီ) မြို့၊ မြန်မာ့အရေး (မီဒီယာ) တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပွဲ
28-11-2009 Burmese Literary Day in New Delhi
၂၈-၁၁-ဝ၉ စာဆိုတော်နေ့၊ နယူးဒေလီ
27-11-09 Consultation meeting on Parliamentarians Solidarity for the Struggle of Democracy in Burma
Organized by Indian Parliamentarian’s Forum for Democracy in Burma (IPFDB)
26-11-2009 The Paranoia of Unpredictability: Is democracy possible in Burma/Myanmar?
Organized by Centre for Northeast Studies, Academy of Third World Studies (ATWS)
25-11-2009 International Day for the Elimination of Violence against Women
၂၅-၁၁-၂ဝဝ၉ အမျိုးသမီးများအား အကြမ်းဖက်မှု နိုင်ငံတကာ ဆန့်ကျင်ရေးနေ့
19 to 22 Nov. 2009 Hind Swaraj Centenary International Conference
၁၉-၂၂ နိုဝင်္ဘာ ၂ဝဝ၉ နိုင်ငံတကာ (ဟင်း-ဆွာရခ်ျ) ကွန်ဖရင့်
18-11-2009 KSDF commemorate the 42nd Anniversary of Khadawmi Operation in New Delhi
၁၈-၁၁-၂ဝဝ၉ KSDF မှ ဦးစီးကျင်းပသော ခါတော်မှီ စစ်ဆင်ရေး ဆန့်ကျင်ပွဲ
12-11-2009 The legal team for 34 freedom fighters in Calcutta
၁၂-၁၁-၂ဝဝ၉ ရခိုင် နှင့် ကရင် (၃၄) ဦးအတွက် ကာလကတ္တား တရားရုံးတွင် တရားရင်ဆိုင်ကြသည့် အဖွဲ့
8-8-2009 The 8888 Day in New Delhi
၈-၈-၂ဝဝ၉ ရှစ်လေးလုံး နှစ်ပတ်လည်နေ့ ဆန္ဒပြပွဲ
7-8-2009 Awareness campaign on 8888 among Chin Community in New Delhi
၇-၈-ဝ၉ ချင်း ကွန်မြူနတီအတွင်း ရှစ်လေးလုံး အသိပညာပေး ဟောပြောပွဲ
2-8-2009 Dr. Tint Swe, B Bhusan Tiwari (Indian MP) & Kim (BCD) in front of Nepal Parliament
၂-၈-၂ဝဝ၉ နီပေါ ပါလီမန်ရှေ့
7-7-2009 Demonstration in New Delhi
၇-၇-၂ဝဝ၉ (ဆဲဗင်း-ဇူလိုင်) နေ့ ဆန္ဒပြပွဲ
10-6-2009 Press conference by Indian MPs
Ma Thin Thain Aung (WLB), Sharad Joshi (Indian MP), Dr. Tint Swe (Burmese MP), Abani Roy (Indian MP)
4-6-2009 Burma Event in Bangalore
၄-၆-၂ဝဝ၉ ဘန်ဂလိုမြို့မှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီရေး လှုတ်ရှားမှု ထောက်ခံပွဲ
27-5-2009 Indo-Burma Solidarity Conference
၂၇-၅-၂ဝဝ၉ (၁၉၉ဝ) ရွေးကောက်ပွဲ နှစ်ပတ်လည်နေ့ အိန္ဒိယ-မြန်မာ သွေးစည်းရေး ကွန်ဖရင့်
26-5-2009 Burma event organized by SAFPI
SAFPI = South Asian Forum for Peoples' Initiative
My life as an NLD နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုများ
The leaders loved by the People
Mother Teresa, Dalai Lama, Daw Aung San Suu Kyi
Gandhi and Aung San Suu Kyi
Nonviolence against unjust rulers
7-10-2000 NCGUB flag at MPU Congress in Dublin, Ireland
၇-၁ဝ-၂ဝဝဝ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ၊ ဒဗ္ဗလင်မြို့တွင် ကျင်းပသော MPU ညီလာခံမှ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းသည့် NCGUB - ဝန်ကြီးချုပ် Dr. စိန်ဝင်းနှင့် ဝန်ကြီးများအဖြစ် ခွန်မားကိုဘန်း၊ ဦးသိန်းဦး၊ ဦးဘိုလှတင့်၊ ဦးမောင်မောင်အေး၊ ဦးမြဝင်း၊ Dr. တင့်ဆွေ၊ Dr. စန်းအောင်၊ ဦးသာနိုး တို့ ညီလာခံ သဘာပတိ MPU ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခွန်တယ်ဒီဘူးရီ ရှေ့မှောက်တွင် NCGUB အလံတော်ကိုင်လျှက် ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုနေစဉ်။
2000-2004 NCGUB Cabinet
၂ဝဝဝ-၂ဝဝ၄ NCGUB အမျိုးသားညွန့်ပေါင်းအစိုးရ အဖွဲ့
23-2-2002 Bommersvik, Sweden MPU/NCGUB joint meeting
၂၃-၂-၂ဝဝ၂ ဆွီဒင်နိုင်ငံ (ဘွန်မားစဗစ်) တွင် ကျင်းပသော NCGUB-MPU အစည်းအဝေးများ တက်ရောက်စဉ်
12-8-2009 National Reconciliation Conference in Jakarta
၁၂-၈-ဝ၉ ဂျကာတာတွင် NCGUB မှဦးစီး ကျင်းပသော အမျိုးသားသင့်မြတ်ရေး ကွန်ဖရင့်
16-5-2009 Demonstration in New Delhi
၁၆-၅-ဝ၉ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွှတ်ပေးရန် ဆန္ဒပြပွဲ
15-3-2009 Demonstration organized by KSDF/KWHRO
၁၅-၃-၂ဝဝ၉ ထမံသီရေကာတာ ဆန့်ကျင်သည့် ဆန္ဒပြပွဲ
11-3-2009 Free Political prisoners meeting
၁၁-၃-၂ဝဝ၉ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား လွတ်မြောက်ရေး ဆွေးပွဲ
12-3-2009 U Win Tin birthday in Delhi
၁၂-၃-၂ဝဝ၉ ဦးဝင်းတင် မွေးနေ့
8-3-2009 International Women's Day
၈-၃-ဝ၉ WLB မှဦးစီး ကျင်းပသော နိုင်ငံတကာ အမျိုးသမီးများနေ့ မစုစုနွေးအကြောင်း ဟောပြောစဉ်။
10-2-2009 drawing competition by BCD
၁ဝ-၂-၂ဝဝ၉ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း မွေးနေ့ ကလေးပန်းချီပြိုင်ပွဲ
2-2-2009 Protest Free Political prisoners
၂-၂-၂ဝဝ၉ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား လွတ်မြောက်ရေး ဆန္ဒပြပွဲ
26-1-2009 NCGUB Consultation Meeting in Dublin, Ireland
၂၆-၁-၂ဝဝ၉ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ၊ ဒပ်ဘလင်မြို့တော်၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအဖွဲ့ ညီလာခံ နှင့် ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး၊
24-1-2009 Nobel laureate Betty Willams
၂၄-၁-၂ဝဝ၉ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအဖွဲ့ ညီလာခံတွင် နိုဗယ်ဆုရှင် ဘက်တီ-ဝီလီယမ် စကားပြောကြားစဉ်
9-1-2009 The 10th Anniversary of KNO
၉-၁-၂ဝဝ၉ KNO ဖွဲ့စည်းသည့် နှစ်ပတ်လည်နေ့
NCGUB Team visiting Netherlands
နယ်သာလင် နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိစဉ်၊
Visiting China-Burma border.jpg
တရုပ်-မြန်မာ နယ်စပ်သို့ ရောက်ရှိစဉ်
27-12-2008 Training cum Seminar on Social & Politics organized by ZYOZMP
၂၇-၁၂-၂ဝဝ၈ ZYOZMP က ဦးစီးစီစဉ်သော နိုင်ငံရေးသင်တန်း
18-12-2008 Lessons from Saffron Revolution organized by Nonviolence group
၁၈-၁၂-၂ဝဝ၈ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး ပေးသော သင်ခန်းစာ ဆွေးနွေးပွဲ တေးသီချင်း သီဆိုကြစဉ်
5-12-2008 Swaraj Dialogue, New Delhi with Rajiv Vora and Dr. Niru
၅-၁၂-ဝဝ၈ (ဆွာရ်ခ်ျ-ဒိုင်ယာလော့ခ်) ကိုယ့်မင်း-ကိုယ့်ချင်း ဆွေးနွေးပွဲ
3-12-2008 Health and Education Talk at Prospect Burma
၃-၁၂-၂ဝဝ၈ Prospect Burma ကျောင်းသားများအား ကျန်းမာရေး-ပညာရေး ဟောပြောပို့ချစဉ်
21-11-2008 Knowledge Talk organized by FTUB
၂၁-၁၁-၂ဝဝ၈ FTUB မှ စီစဉ်သော နိုင်ငံရေးသုတ ဟောပြောပွဲ
16-11-2008 NCGU-NCGUB meeting
၁၆-၁၁-၂ဝဝ၈ အမျိုးသား ညွန့်ပေါင်းအစိုးရ နှင့် အမျိုးသား ကောင်စီ ပူးတွဲအစည်းအဝေးကျင်းပစဉ်
6-11-2008 Burmese monks visiting NCGUB
၆-၁၁-၂ဝဝ၈ မြန်မာ ဘုန်းတော်ကြီးများ အမျိုးသားညွန့်ပေါင်းအစိုးရရုံးသို့ ကြွရောက်စဉ်
1-7-2008 Socialist International Conference in Greece
၁-၇-၂ဝဝ၈ ဂရိစ်နိုင်ငံ၊ အေသင်မြို့တော်တွင် ကျင်းပသော ဆိုရှယ်လစ်-အင်တာနေရှင်နယ် ကွန်ဖရင့်
30-5-2008 SI meeting in Islamabad
၃ဝ-၅-၂ဝဝ၈ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၊ အစ္စလန်မာဘတ်မြို့၊ ဆိုရှစ်လစ် အင်တာနေရှင်နယ် အာရှ-ပစိဖိတ် ကော်မတီအစည်းအဝေး တက်ရောက်စဉ်
15-5-2008 Prayer for Nargis in Delhi
၁၅-၅-၂ဝဝ၈ (နာဂစ်) မုန်းတိုင်းအတွင်း သေဆုံးရသူများအတွက် အိန္ဒိယ-ခရစ်ယန် အသင်းတော်များ၏ ဆုတောင်းပွဲ
7-4-2008 Burma talk in JNU
၇-၄-၂ဝဝ၈ (ဂျဝါဟာလားလ်) တက္ကသိုလ်တွင် မြန်မာ့အရေး ဆွေးနွေးစဉ်
15-12-2007 Burmese Literary Day at India International Centre
၁၅-၁၂-၂ဝဝ၇ စာဆိုတော်နေ့အား အိန္ဒိယ နိုင်ငံတကာ စင်တာတွင် ကျင်းပစဉ်
28-11-2007 Talk on Saffron Revolution in Nagpu
၂၈-၁၁-၂ဝဝ၇ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး အကြောင်း နာ့ခ်ပူးမြို့တွင် ဟောပြောစဉ်
13-11-2007 His Holiness the Dalai Lama released Daw Suu poster
၁၃-၁၁-၂ဝဝ၇ တိဘက်ခေါင်းဆောင် ဘုန်းတော်ကြီး ဒလိုင်လားမားမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည့် ပိုစတာကို ဖွင့်လှစ်ပေးစဉ်
26-10-2007 Talking on Saffron Revolution in Bombay
၂၆-၁ဝ-၂ဝဝ၇ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး အကြောင်း ဘုံဘေမြို့တွင် ဟောပြောစဉ်
16-10-2007 Saffron Revolution talk in Pune
၁၆-၁ဝ-၂ဝဝ၇ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး အကြောင်း ပူနေးမြို့တွင် ဟောပြောစဉ်
10-9-2007 Prayer by all Burmese Christian Churches
၁ဝ-၉-၂ဝဝ၇ (နာဂစ်) မုန်းတိုင်း အတွင်း သေဆုံးရသူများအတွက် မြန်မာ-ခရစ်ယန် အသင်းတော်များ၏ ဆုတောင်းပွဲ
15-8-2007 Extending unconditional Support for 92 MPs' letter to UNGS
၁၅-၈-၂ဝဝ၇ ပြည်တွင်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ထုတ်ပြန်ချက်အား အိန္ဒိယရောက် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက ထောက်ခံသည့် အခန်းအနား
7-8-2007 Demonstration for 8888 Day
7-8-2007 Anti-military dictatorship demonstration in New Delhi
၂ဝဝ၇ ရှစ်လေးလုံးနေ့ ဆန္ဒပြပွဲ
6-8-2007 Daw Khin Saw 101 years
၆-၈-၂ဝဝ၇ အာဇာနည် ဦးဘဝင်း၏ဇနီး ဒေါ်ခင်စောအတွက် ကုသိုလ်ပြုစဉ်
19-7-2007 Martyrs' Day in New Delhi
၁၉-၇-၂ဝဝ၇ NCGUB မှ ဦးစီးကျင်းပသော အာဇာနည်နေ့ အခန်းအနား
3-4 April 2007 Burma Conference, Kathmandu, Nepal
၂ဝဝ၇ ဧပြီလ ၃-၄ ရက် နီပေါနိုင်ငံ၊ ခတ္တမတ္တူမြို့တော်တွင် ပြုလုပ်သော မြန်မာ့အရေး (ကွန်ဖရင့်)
11-1-2007 Meeting with Indian politicians
၁၁-၂-၂ဝဝ၇ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ နှင့် ဦးသန်းစိန် အိန္ဒိယနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များနှင့်တွေ့စဉ်
18-12-2006 ILO Training organized by FTUB
၁၈-၁၂-၂ဝဝ၆ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားသမဂ္ဂ သင်တန်းတခုတွင် စကားပြောကြားစဉ်
16-12-2006 All India Forward Bloc Congress in Calcutta
၁၆-၁၂-၂ဝဝ၆ အိန္ဒိယနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ (ဖေါဝပ်ဘလော့ခ်) ပြည်ထောင်စုအဆင့် ကွန်ဖရင့် တက်ရောက်စဉ်
15-12-2006 Meeting with Speaker of House, Nepal Parliament
၁၅-၁၂-၂ဝဝ၆ နီပေါလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌနှင့်တွေ့ဆုံစဉ်
15-12-2006 Demonstration in Kathmandu
၁၅-၁၂-၂ဝဝ၆ နီပေါနိုင်ငံ၊ ခတ္တမတ္တမြို့တော်တွင် ပြုလုပ်သော မြန်မာ့အရေး ဆန္ဒပြပွဲ
28-10-2006 Talk on Burma at Gandhi Peace Foundation
၂၈-၁ဝ-၂ဝဝ၆ ဂန္ဓီ-ငြိမ်းချမ်းရေး ခန်းမ တွင်ပြုလုပ်သော မြန်မာ့အရေးဆွေးနွေးပွဲ
20-10-2006 Political situation discussion organized by UNLD-LA
၂ဝ-၁ဝ-၂ဝဝ၆ UNLD/LA မှပြုလုပ်သော နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲ
8-7-2006 to 15-7-2006 MPU-NCGUB meeting in Italy
အီတလီနိုင်ငံ၊ တူရင်မြို့တွင်ကျင်းပသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအဖွဲ့ အထူးအစည်းအဝေး
17-4-2006 Shwe Gas Campaign, New Delhi
၁၇-၄-၂ဝဝ၆ ရွှေဓါတ်ငွေ့ (ကင့်ပိန်း) (ဆီမီနာ)
7-2-2006 Seminar of India’s Role for National Reconciliation in Burma
၇-၂-၂ဝဝ၆ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး နှင့် အိန္ဒိယ၏ အခန်းကဏ္ဍ (ဆီမီနာ)
12-12-2005 KSDF Day
၁၂-၁၂-၂ဝဝ၅ KSDF မှ ဦးစီးကျင်းပသော ကူကီး တော်လှန်ရေးနေ့ အခန်းအနား
12-6-2005 Greeting Prime Minister of Nepal GP Koirala
ဒေလီသို့လာရောက်သည့် နီပေါ ဝန်ကြီးချုပ်အား ကြိုဆိုစဉ်
23-12-2005 MPU meeting in Maesot
၂၃-၁၂-၂ဝဝ၆ MPU အည်းအဝေး၊ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ မဲဆောက်မြို့
28-11-2004 AIPMC in Malaysia
မလေးရှားနိုင်ငံ၊ ကွာလာလန်ပူတွင်ကျင်းပသော (အာစီယန်) မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအဖွဲ့ အစည်းအဝေး၊ တက်ရောက်စဉ်
AIPMC Meeting - Dr. Tint Swe, Daw San San, Teresa Kok (Malaysia)
မလေးရှားနိုင်ငံ၊ ကွာလာလန်ပူတွင်ကျင်းပသော (အာစီယန်) မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအဖွဲ့ အစည်းအဝေး၊
4-9-2004 Challenges of Democracy in Burma & Role of India
၄-၉-၂ဝဝ၄ ဂန္ဓီ-ငြိမ်းချမ်းရေး ခန်းမတွင်ကျင်းပသော မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီရေး၏ အဟန့်အတားများ ကွန်ဖရင့်
12-17 July 2004 training organized by ITC-ILO-ACTRAV
လွတ်လပ်သော အလုပ်သမားသမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ်၊ မြန်မာနိုင်ငံမှ စီစဉ်သော အလုပ်သမားသင်တန်း
2-1-2004 Protest on Indian President's visit to Burma
အိန္ဒိယသမတ၏ မြန်မာပြည်ခရီးအား ဆန့်ကျင်သည့် ဆန္ဒပြပွဲ
13-8-2003 35th Anniversary of Arakan Rice Crisis
၃၅ ကြိမ်မြောက် ရခိုင်ပြည် ဆန်ပြဿနာနေ့ အခန်းအနား
19-6-2003 Daw Suu birthday Global Action Campaign for Burma in New Delhi
၁၉-၆-၂ဝဝ၃ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့ ဆန္ဒပြပွဲ
27-5-2002 (1990) Election Anniversary Day
၂၇-၅-၂ဝဝ၂ ရွေးကောက်ပွဲ (၁၂) နှစ်ပတ်လည်နေ့
9-5-2002 MPs from India in Turin
၉-၅-၂ဝဝ၂ အိန္ဒိယရောက် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဦးထန်လျန်ပေါင်၊ ဦးသာနိုး၊ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ၊ ဦးသန်းစိန်၊
5-5-2002 MPU Special Meeting in Turin, Italy
၅-၅-၂ဝဝ၂ အီတလီနိုင်ငံ၊ တူရင်မြို့တွင်ကျင်းပသော မြန်မာ့အရေး-ကွန်ဖရင် နှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များအဖွဲ့ အထူးအစည်းအဝေး
9-5-2002 MPs from India and USA in Italy
၉-၅-၂ဝဝ၂ အိန္ဒိယရောက် နှင့် ဝါရှင်တန်ရောက် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဦးထန်လျန်ပေါင်၊ ဦးသာနိုး၊ ဒေါက်တာစိန်ဝင်း၊ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ၊ ဦးသန်းစိန်၊ ဦးဘိုလှတင့်
28-4-2002 protest for SNLD leaders' jail term
၂၈-၄-၂ဝဝ၂ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင်များအား နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်များ ချမှတ်သည်အတွက် ဆန့်ကျင်သည့် အစည်းအဝေးကျင်းပစဉ်
2000 November Visiting Zomi Revolutionary Organization office
မနီပူပြည်နယ်၊ ချူရာချန်ပူရှိ ဇိုမီးပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးအဖွဲ့ ရုံးသို့ ရောက်ရှိစဉ်
November 2000 visiting Leikhun Camp
၂ဝဝဝ နိုဝင်္ဘာ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ နှင့် ဦးမြဝင်းတို့ မနီပူပြည်နယ် မြန်မာကျောင်းသားများ၏ (လေခွန်း) စခန်းသို့ လည်ပတ်ကြစဉ်
November 2000 visiting Manipur
၂ဝဝဝ နိုဝင်္ဘာလ မနီပူပြည်နယ် အင်ဖါးတွင် မြန်မာကျောင်းသားများ
25-27 June 2000 World Forum for Democracy in Poland
ပိုလန်တွင်ကျင်းပသော ကမ္ဘာ့ ဒီမိုကရေစီ (ဖိုရမ်) တက်ရောက်စဉ်
April 2000 IPU Lobby in Jorder with Japanese delegation
၂ဝဝဝ ဧပြီ၊ ဂျော်ဒန်နိုင်ငံ အာမန်မြို့တော်တွင်ကျင်းပသော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်များသမဂ္ဂ အစည်းအဝေးတွင် မြန်မာ့အရေး ဆောင်ရွက်ကြစဉ်
26-28 March 2000 Seminar on Conflict Resolution
နယူးဒေလီတွင် ကျင်းပသော ပဋိပက္ခဖြေရှင်းခြင်း ဆီမီနာ
20-22 January 2000 Democracy for Burma, International Trade Union Conference, Kathmandu, Nepal
နီပေါနိုင်ငံ ခတ္တမတ္တူတွင် ကျင်းပသော မြန်မာ့အရေးကွန်ဖရင့်
26-9-1999 Anniversary of NLD Day
၂၆-၉-၁၉၉၉ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် တည်ထောင်ခြင်း နှစ်ပတ်လည်နေ့
19-6-1999 Daw Suu birthday
မွေးနေ့၊ မနေမြမြဆွေ၏ တပင်တိုင်အက
1998 Burmese National Day in New Delhi
၁၉၉၈ (၇၈) ကြိမ်မြောက် အမျိုးသားနေ့
8-3-1998 International Women's Day organized by WRWAB
၈-၃-၁၉၉၈ နိုင်ငံတကာ အမျိုးသမီးများနေ့
4-1-1998 Independence Day in New Delhi
၄-၁-၁၉၉၈ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးနေ့အား နယူးဒေလီမြို့တော်တွင် ကျင်းပစဉ်
8-8-1997 The 9th Anniversary of Democracy Movement
၈-၈-၁၉၉၇ ရှစ်လေးလုံး နှစ်ပါတ်လည်နေ့
19-6-1997 Burma Women's Day
19-6-1996 Daw Suu birthday
4-10-1995 Nonviolence Training
၄-၁ဝ-၁၉၉၅ အကြမ်းမဖက်လှုပ်ရှားမှု သင်တန်း
1994 On the way to Manerplaw - My Second trip
၁၉၉၄ သောင်ရင်းမြစ်ကို စက်လှေစီးပြီး မာနယ်ပလောသို့ ဒုတိယအခေါက် သွားရောက်ခြင်း
1994 Symposium on Burma Politics, New Delhi
၁၉၉၄ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲ
19-11-93 Meeting with UN envoy Yozo Yokota at Karen refugee camp
၁၉-၁၁-၁၉၉၃ ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်တနေရာတွင် ကုလသမဂ္ဂ ကိုယ်စားလှယ် (ယိုဇိုယိုကိုတာ) အား တွေ့ဆုံစဉ်
1992 Demonstration at Boat Club, New Delhi
၁၉၉၂ နယူးဒေလီမြို့တော်တွင် ပဌမဆုံးအကြိမ် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး ဆန္ဒပြပွဲ
1991 Welcome by Indian Burmese in Delhi
၁၉၉၁ နယူးဒေလီသို့ ရောက်ရှိလာသော
ဒေါက်တာတင့်ဆွေအား အိန္ဒိယ-မြန်မာ လူမျိုးများက ကြိုဆိုကြစဉ်
1991 in Aizawl
၁၉၉၁ မီဇိုရမ်ပြည်နယ်၊ အိုက်ဇောမြို့တွင်
1991 Zimabauk Camp, Aizawl, Mizoram
၁၉၉၁ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ မီဇိုရမ်ပြည်နယ်၊ အိုက်ဇောမြို့၊ ဇင်မာဘောက် ကျောင်းသားစခန်း
1991 Meeting with Chin, Arakan and Student leaders in Aizawl
၁၉၉၁ ပုလဲမြို့နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဝင်များ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ မီဇိုရမ်ပြည်နယ်၊ အိုက်ဇောမြို့တွင် ချင်း၊ ရခိုင် တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကျောင်းသား အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူ
19-6-1991 Daw Suu birthday in Aizawl
၁၉-၆-၁၉၉၁ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ မီဇိုရမ်ပြည်နယ်၊ အိုက်ဇောမြို့တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မွေးနေ့ ကျင်းပစဉ်
12-2-1991 Union Day in Aizawl, Mizoram, India
၁၂-၂-၁၉၉၁ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ မီဇိုရမ်ပြည်နယ်၊ အိုက်ဇောမြို့တွင် ၁၉၉၁ ပြည်ထောင်စုနေ့ ကျင်းပစဉ်
1991 NLD organizers from Pale in Aizawl, Mizoram, India
၁၉၉၁ ပုလဲမြို့နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဝင်များ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ မီဇိုရမ်ပြည်နယ်၊ အိုက်ဇောမြို့တွင် တနှစ်ကျော်ကြာ နေထိုင်ခဲ့ကြသည်
1990 December NLD organizers from Pale detined in the lock-up room at Saiha Police Station, Mizoram
၁၉၉ဝ ဒီဇင်္ဘာ၊ ပုလဲမြို့နယ် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဝင်များ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ မီဇိုရမ်ပြည်နယ်၊ စိုင်ဟာမြို့ ရဲအချုပ်ခန်းတွင် ၃ ရက်ကြာ နေခဲ့ရစဉ်
21-12-1990 NLD organizers from Pale crossing Indo-Burma border
၂၁-၁၂-၁၉၉ဝ ပုလဲမြို့နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဝင်များ မြန်မာ-အိန္ဒိယ နယ်စပ်ကိုဖြတ်ကျော်ကြစဉ်
၂၁-၁၂-၁၉၉ဝ ပုလဲမြို့နယ် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဝင်များ မြန်မာ-အိန္ဒိယ နယ်စပ်ကိုဖြတ်ကျော်ကြစဉ်
19-12-1990 NLD organizers from Pale on Chin Hills
၁၉-၁၂-၁၉၉ဝ ပုလဲမြို့နယ် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဝင်များ အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ ထွက်ခွါစဉ် ချင်းတောင် တနေရာ
20-12-1990 NLD organizers from Pale on Chin Hills
၂ဝ-၁၂-၁၉၉ဝ ပုလဲမြို့နယ် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဝင်များ အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ ထွက်ခွါစဉ် ချင်းတောင်ပေါ်မှာ
Endometriosis (1) သားအိမ်ရောဂါ (၁) http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2010/09/endometriosis.html
Endometriosis (2) သားအိမ်ရောဂါ (၂) http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/2012/08/endometriosis-2.html
Formula သူငယ်တန်းပုံသေနည်း http://dts-political-page.blogspot.in/2014/03/formula.html French kiss အနမ်း နဲ့ ကျန်းမာရေး http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/2012/03/french-kiss.html
Menstruation (1) မိန်းမပီသတာ စိုးရိမ်စရာမရှိပါ (၁) http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2011/04/menstruation.html
Menstruation Questions ရာသီအကြောင်း http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/2012/03/menstruation-questions.html
Modified Penis ပန်းအဖျား အဆန်းအပြားလုပ်ခြင်း http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/2012/03/modified-penis.html
Nose Plastic Surgery နှာခေါင်း လှချင်သူ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2011/02/nose-plastic-surgery.html
Pregnancy, LSCS and Anesthesia ဗိုက်ခွဲမွေးတာ ဘယ်မေ့ဆေး သုံးမှာလဲ http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/2012/05/pregnancy-cs-and-anesthesia.html
ချင်းတွင်းမှ သောင်ရင်း http://my-sayawun-life.blogspot.in/2013/06/blog-post_16.html ချင်းတွင်းမြစ်ကူး ညောင်ပင်ကြီးကူတို http://my-sayawun-life.blogspot.in/2014/01/blog-post.html
(၆၃)နှစ်မြောက် ကရင့်အမျိုးသားတော်လှန်ရေးနေ့ ဂုဏ်ပြ...
10-1-2012 Burmese exile predicts decades before na...
၄-၁-၂ဝ၁၂ NLD (၆၄) ကြိမ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့
NCGUB (၆၄) နှစ်မြောက် မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးနေ့ ...
1-3-2002 (MPU) (NCGUB) Meeting, Bommersvik, Sweden...
၁-၁၂-၂ဝ၁၂ အောင်ဆန်း​စုကြည်၏ နှစ်သစ်ကူး​ နှုတ်ခွန်း​...
1-1-2012 New Year Message from Daw Aung San Suu Ky...
31-12-2011 Imphal-Mandalay bus service likely from...